FEVER (QANDHO) Fever and Acetaminophen (Tylenol ®) Qandhada iyo Dawada Acetaminophen (Tylenol ®) Bukaanka _______________________________________ Haddii ilmahaaga korkiisa aad kulayl ka dareemaysid, waxa laga yaabaa inuu qabo waxa...
Banadir Pharmacy : What you Need to Know about OTC Medicines Have you tried buying medicine from a pharmacy yet you were told that you cannot buy one because you need to have a prescription from your doctor before you can buy it? Have you...
Waa maxay macnaha baaritaanka dhiigeyga? Baruur (Cholesterol): Baruurta waa koox xeer ah taasoo ku nool jirka. Heerarka sare ee baruurta, si-kastaba, waxaa muujinaaya cuntada oo aad ugu badan kaarbo-haaydareytis, gaar ahaan...
Waa maxay macnaha baaritaanka dhiigeyga? Bir (Iron): Birta waxay muhiim u tahay wax soo saarka unugyada dhiiga gaduudan ee jirka. Jirka wuxuu u baahan yahay bir si uu u sameeyo unugyada dhiiga gaduudan. Unugyada dhiiga gaduudan...
Diaper Rash Information War ku Saabsan Finanka Xafaayadda Finanka Xafaayaddu (Diaper Rash) waa erey la isticmaalo si loo sharaxo finan ama xajiin ah aagga uu daboolo xafaayad ama qoyaan-celiska ilmaha. Calaamadda ugu...